Sidee loo doortaa bandhig warshadeed oo ku habboon?
Sidee loo doortaa bandhig warshadeed oo ku habboon? Waxaad ka dooran kartaa dhinacyo badan sida midabka, dhalaalka, xagalka daawashada, qaabeynta, iyo nolosha adeegga. 1. Midab Codsiyada warshadaha qaarkood, macluumaadka midabka gaarka ah ayaa ka muhiimsan qoraalka ama nambarada. Boqolkiiba midabka NTSC ayaa fadhiyay ...
Hordhac mabda'a shaqada ee shaashadaha taabashada warshadaha kala duwan.
Waxaan soo bandhignay waxoogaa macluumaad ah oo ku saabsan shaashadaha taabashada warshadaha ka hor, oo ay ku jiraan xulashada alaabada laga soocayo tayada shaashadaha taabashada, sida loo ilaaliyo shaashadaha taabashada warshadaha iyo wixii la mid ah. Laakiin sidee ayuu u shaqeeyaa shaashadda taabashada shaashadda? 1. Shaashadda taabashada warshadaha ee wax iska caabbinta: Tani waxay u ...
Farqiga u dhexeeya shaashadda taabashada warshadaha iyo muuqaalka dareeraha dareeraha ah
Isticmaalayaasha ayaa ka shakiyay in maxay tahay farqiga u dhexeeya shaashadda taabashada warshadaha iyo muuqaalka dareeraha dareeraha ah? Si fudud u hadal, shaashadda taabashada warshadaha si toos ah ayaa loo riixi karaa, taas oo ku habboon oo dhakhso leh. Waa waxqabadka jawaab celinta taabashada ee nidaamka shaashadda taabashada ee warshadaha taabashada LCD ...
Muxuu ku kala soocayaa Kombuyuutarka Ganacsiga iyo PC-ga Warshadaha?
Mid Autum maalmood Salaan iyo ogeysiis ka Axnew
Gacaliye All, Fadlan si naxariis leh in lagu wargeliyaa in Display Axnew ee Shiinaha, waayo Festival Mid-Dayrta oo ku saabsan 15-(Thursday) inay 18 (Sunday), Sep, 2016. Fadlan caawiyaan inay la xiriiraan fariin this to our shaqaalaha, macaamiisha, qeybiyeyaasha iyo wax kasta oo xisbiyada kale ee la xiriira haddii loo baahdo. IT, Operation, Maaliyadda iyo depar kale ...
Axnew bixisaa saadaaliyey kormeerayaasha xiriiri capacitive ka 7 inch si ay 32 inch
Axnew bixisaa tirada kala duwan ee kormeerayaasha xiriiri capacitive saadaaliyey laga bilaabo 7 inch, 8 inch, 8.4 inch, 10 inch, 10.4 inch, ilaa TP 21.5 inch, 32 inch, iwm. Just furaysto la interface USB, iyo waxa ay si xor ah u shaqeeyaan. Sida laga soo xigtay codsiyada macaamiisha, kooxda injineer our hormariyey oo dhumucdiisuna waxay kala duwan ee ...
taabashada Industrial kumbiyuutarada guddi
Iyada oo shaqo ee pc kiniin waa sii fiican oo ka wanaagsan, beeraha badan warshadaha ayaa bilaabay in ay isticmaalaan kumbiyuutarada guddi ka jaban, iyo suuqa xiriiri warshadaha kumbiyuutarada guddiga ayaa sidoo kale lagu sameeyay isbedel wayn, dadkii waxay bilaabeen inay u muuqdaan in ay is barbar dabeecadda aadanaha in kiniin taabashada-screen ah computer. Sidaa darteed, ka ...
Horumarinta ee shaashadda saadaalinta-capacitive
Iyada oo popularization ee dhaqankan, shaashadda saadaalinta capacitive noqotay screens taabashada ugu caansan oo si tartiib ah u bedelo shaashadda resistive sida dooqa koowaad macaamiisha ah ee. Faa'iidooyinka screen capacitive: 1. Waxa aan si fudud u saameeyeen walxaha fiiqan xoqidda iyo xidhashada 2 ....
website kormeerayaasha warshadaha cusub ee shirkadda AXNEW
La aasaasay sanadkii 2009, Axnew si guul la aasaasay xiriirka muddo dheer la macaamiisha in this line warshadaha bandhigay adduunka oo dhan. Si aad u aaminsan, our website horeysay axnew.com si fiican u yaqaan by macaamiisha joogtada ah. Haddaba our group bilaabo website our labaad: https: // warshadaha-lcdmonitor ...
Gacaliye Niman yahow ama Marwo, Fadlan la wargeliyay in our warshad waxaa laga sugayaa inay u guurto dhisme cusub ee park ka warshadaha iyo ka dib Jan 1, 2015. cinwaanka New waa sida hoos ku qoran: Floor 4th, Yinliantong Industrial Park, NO.460 AilianZhangbei, Degmada Longgang , ShenzhenChina. Lambarka taleefanka, Tirada Fax iyo E-mai ...
IR Touch shaqada iyo horumarinta
screen taabashada infrared horumariyo qaababka dual iyo multi-taabto si aad tirada weyn screen bandhigay. Noo sheeg badan oo ku saabsan mabda'a IR taabto marka hore. Screen Touch infrared waa jir ah taabashada kaasoo inta badan lagu rakibay hore ee shaashadda bandhigay. jir ayaa la dhexgeliyey circui daabacay ...
AXNEW bandhigay monitor warshadaha
bandhigay AXNEW idinla wadaago wax ku saabsan kormeeraha warshadaha. Sidee in ay doortaan mid ka mid monitor warshadaha? Kormeerayaasha LCD Industrial sidoo kale sooci ujeeddo oo isku mid sida kormeerayaasha LCD for laptops. Si kastaba ha ahaatee, a monitor warshadaha run: bilaabi doonaan oo ay maamulaan in deegaanno ka shaqeeya adag, ku shaqayn doonaa in badan ...
guddiga xakamaysada Industrial la ballaaran temperatureto taageero kormeerayaasha ku sugan deegaanka shaqada adag. Kormeerayaasha waa la CE-EMC, CE-LVD, FCC, waafaqsanaanta Rohs.
Cinwaanka: Dabaqa Dabaqa, Yin Lian Tong Industrial Park, Ai Lian Zhangbei Road No.460; Degmada Long gang, Shenzhen China518172